Zoran Tosic - क्यारियर भद्र तर होनहार सर्बियन फुटबल खेलाडी
Zoran Tosic - एक जवान र होनहार खेलाडी आज CSKA मास्को र आफ्नो पैतृक सर्बियन राष्ट्रिय टीम को सम्मान बचाव गर्ने छ।
प्रसिद्ध फुटबल युगोस्लाभिया मा Zrenjanin को शहर मा 1987 मा अप्रिल 28th मा प्लेयर,, को जन्म ठाउ। प्ले क्यारियर उहाँले धेरै युवा उमेर थाले। 17 19 वर्ष देखि उहाँले नाम एफसी लागि प्ले "Proleter Zrenjanin।" उहाँलाई लागि, सर्बियन् सात मिलान प्ले छ। उहाँले तुरुन्त winger को स्थिति लिए, तर आफ्नो पहिलो क्लब को एक भाग भएर लक्ष्य, स्कोर थिएन। त्यसपछि उहाँले एफसी "Banat Zrenjanin" अर्को वर्ष प्ले। यो टोली उहाँले 32 खेल खर्च र दुई लक्ष्य जारी गरेको छ। क्लब लागि प्ले जवान खेलाडी लोकप्रियता र पहिचान ल्याए। फलस्वरूप, Zoran Tosic4वर्ष को लागि एक सम्झौता हस्ताक्षर जो व्यावसायिक क्लब "Partizan", एक निमन्त्रणा प्राप्त गरेको छ। तर, उहाँले मात्र 2009 सम्म त्यहाँ बसे।
ब्रिटेन र जर्मनी
वर्ष 2008 Zoran Toshich मा, "Partizan" Adem Ljajić आफ्नो टीम-मेट साथ "म्यान्चेस्टर युनाइटेड" सारियो। यो दुई सर्बियन खेलाडी को क्यारियर मा अगाडी एक महान फड्को थियो। 2008 मा, वर्ष लेट नोभेम्बर मा, Zoran Tosic काम गर्न अनुमति बेलायतमा प्राप्त, तर एक महिना भन्दा (जनवरी 2, 2009) पछि, स्थानान्तरण भयो। आफ्नो टोली-मेट Adem त राम्रो fared गरेको छैन: उहाँले सबै त छिटो जारी गर्न असफल भयो। Tosic पहिले नै ब्रिटिश संग प्रशिक्षित भइरहेको बेला, र कहिले काँही क्षेत्र मा बाहिर जाने, Ljajić बस खत्म कागजातहरूको साथ समस्या समाधान र अर्को देशमा जाने थियो।
को सर्बियन् को "संयुक्त" 14 औं नम्बर लिए र मिडफिल्डर रूपमा कार्य गर्न थाले। तिनीहरूले जर्मन "कोलोन" रुचि भए किनभने तथापि, Tosic बेलायतमा रहन थिएन। क्लब को प्रतिनिधिहरु ब्रिटिश 2010 मा 29 जनवरी मा वर्ष, सर्बियन् जर्मनी हालको मौसम को अन्त अघि सारियो भनेर, एक राम्रो रकम र सान्दर्भिक अवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
सर्बिया एक लामो समय को लागि रहन निर्णय जसमा क्लब, CSKA मास्को छ। फुटबल खेलाडी Zoran Tošić 2010 मा "CSKA" सम्झौता संग हस्ताक्षर भएको छ, र अझै पनि टोलीमा रंग बचाव। 8 लाख पाउण्ड को Muscovites मिडफिल्डर लागत।
"अंजी" विरुद्ध लक्ष्य र एउटै खेलमा सहायता - उहाँले फुटबल मा आफ्नो क्यारियर मास्को मा धेरै राम्रो तरिकाले थाले। शत्रु को दोस्रो बल, उहाँले4दिन यसको debut पछि डिजाइन, र यो "Anorthosis" विरुद्ध मिलान थियो। भनेर मिडफिल्डर पनि स्वयम्ले युरोप लिग राम्रो तरिकाले देखाए। खैर, त्यो खेलमा र Zoran एक त डबल issuing द्वारा दोस्रो गोल गरेका थिए। खेल नव आगन्तुक प्ले CSKA टोलीका र प्रशंसक दुवै को आदर प्राप्त, टोलीमा को नेता भए।
हामीलाई एक युवा र बलियो खेलाडी को फोटो देखाउँछ जसले Zoran Tosic, पनि राम्रो बनेको छ र पछि सिजन मा, युरोप लिग को रूपरेखा मा पोर्चुगिज "पोर्ट" विरुद्ध आफ्नो लक्ष्य खुलेको छ। तर, खेल Muscovites विरोधीहरूले अङ्क 1 स्वीकारिएको: 2।
सामान्य मा, सबै मौसम मा एक यूगोस्लाव राम्रो परिणाम देखाए। तथापि, 2012/13 मा उहाँले घाइते भएको थियो - पाँचौं एक भंग metatarsal हड्डी। तर उहाँले फर्कंदा, फेरि म हथौडा गर्न थाले। उदाहरणका लागि, गेट, "क्रास्नोडार" मा उहाँले तीन लक्ष्य, गोल एक टोपी-चाल गोल गरेका थिए। उनले म्याच को सबै भन्दा राम्रो खेलाडी र एक सम्पूर्ण रूपमा टोलीमा नाम थिएन। र सर्बिया को आफ्नो मातृभूमि मा 2014 Tosic सर्वश्रेष्ठ फुटबल खेलाडी को शीर्षक पुरस्कृत गरियो।
अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर र रोचक तथ्य
राष्ट्रिय टोली मिडफिल्डर पनि राम्रो कुरा साबित भयो। Zoran Tosic, जसको जीवनी विभिन्न रोचक तथ्य replete छ, 2007 मा राष्ट्रिय टोलीसँग उहाँले युरोपेली च्याम्पियन चाँदी भयो। रूस र कप र सुपर कप देश (पनि2पटक) को पनि दुई पटक च्याम्पियन। को "म्यान्चेस्टर युनाइटेड" संग Tosic इङ्गल्याण्ड को च्याम्पियनशिप मा र लिग कप मा विजेता भएको थियो।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि को रूप मा, फुटबल खेलाडी हाल छोडपत्र। पूर्व-पत्नीको नाम डायना छ, र यो देखि Zoran दुई छोराछोरी छन्। सर्बियन बाहेक, Tosic आफ्नो "युरोपेली" विगतमा जडानमा रूसी भाषा, प्लस सबै थाह छ यो अंग्रेजी र जर्मन पोख्त एक बिट छ। मित्र र टोलीका एक शान्त, परिवार र गर्न जो घमन्डी मानिसको रूपमा Zoran चिनारी रोग को तारा लगाइदिए छैन।
र Tosic धेरै असामान्य खेलाडी छ। उहाँले कौशल र गति Dribbling, बायाँ खुट्टा देखि एक शानदार हडताल भएको थियो। धेरै दिग्गज Arenom Robbenom आफ्नो प्रदर्शन तुलना गर्नुहोस्। स्कोर र सहायता दिन Tosic सजिलो।
यो प्रतिभाशाली खेलाडीहरू नयाँ च्याम्पियनशिप मा आफ्नो क्यारियर मा हरेक सफलता र शुभकामना इच्छा रहन्छ।
Georgina Wijnaldum: क्यारियर उपलब्धिहरू
Geri sPID: वेल्स कोच जीवनी र अचानक मृत्यु
कसरी टिभी हेरेर लागि "Sopkastom" प्रयोग गर्न
Juande Ramos कसैले आवश्यक छ?
अंग्रेजी प्रतिभा Dzhessi Lingard
श्रम अनुभवी को लाभ बारेमा हामी के थाहा?
Oksana Radchenko लेव Durov
हल्का समग्र ब्लक: समीक्षा र घरहरू निर्माण छ
सूर्य देखि मतलब - छोड्न तयार №1
Multivarka मा कीमा बनाएको मासु संग स्वादिष्ट पास्ता खाना पकाउने
Windowed मोड र फिर्ता मा खेल कसरी चलाउन?
रूस मा hepatitis B संग सेना चड्नुहुन्छ?